> Resource > Mac > Macbook Air Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Macbook Air
Waxaan ka Macbook Air soo kaban karto, tirtiray Files?
Waxaan u baahan inuu ka soo kabsado xogta ka Macbook Air. Dhibaatada waxa ay tahay in aan tirtiro dhammaan xogta shakhsiga ku yaal, maxaa yeelay, waxaan doonayay inaan iibiyo. Laakiin waxaan halmaamay in la sameeyo gurmad ah oo ka mid ah macluumaadka la tirtiro. Hadda waxaan si ka qoomameyn. Ma jiraa Macbook Air utility wax soo kabashada xogta in ay awoodi karto in ay caawiyaan?
Xogta Macbook Air lagu lumin karaa sabab u tirtirka, formatting shil ah, weerarka virus iyo wixii la mid ah. Mar kasta oo xogta lumay ka Macbook Air, waxaa la qorayaa file sida geli karin ka hor xogta cusub u overwrites. Sidaas awgeed, waxaan soo jeedin in aan aad isticmaasho Macbook Air Dib Guuldaradii xogta, ilaa aad dib ugu heli xogta aad lumay.
Wax kasta oo sababaha keeni file lumo ama la tirtiray ka Macbook Air, Wondershare Data Recovery for Mac waa mid ka mid ah barnaamijyada soo kabashada Macbook Air ugu hufan ee aad ka bogsato files kala duwan ka, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, document files, emails, iwm By waxaa ku rakibidda on your Macbook Air, waxaad yeelan doontaa in ay soo kabsadaan xogta lumay ka qalab lagu kaydiyo sida drive dibadda adag, camera digital, flash drive, kaadhka xusuusta, iwm
Download version maxkamadda hadda. Utility Tani waa 100% ammaan ah oo si buuxda u la jaan qaada Mac OS X 10.8 (Mountain Libaaxa) hadda.
Qabtaan Data Recovery Macbook Air in 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Select soo kabashada hab inuu ku soo bilowdo Macbook Air Data Recovery
Orod Wondershare Data Recovery for Mac aad Macbook Air, markaas barnaamijka la tusay doonaa sida image hoose. Waxaad ka akhrisan kartaa tilmaamaha iyo go'aan hababka soo kabashada kugu habboon ugu.
Halkan, inuu ka soo kabsado files tirtiray ka Macbook Air, aynu dooro "lumay Recovery File".
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan xijaab meesha faylasha aad ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 2 Scan Macbook Air Barzakh u Khasaaray Files
Markaas qaab oo dhan qoruhu aad Macbook Air, kaliya aad u baahan doontaa barnaamijka in ay doortaan mid ka mid sax ah oo ka dhacay on "Scan" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado xogta ka qalab lagu kaydiyo dibadda, fadlan hubi in ay noqon karto oo xidhiidh wanaagsan leh oo aad buug Macbook Air.
Tallaabada 3 Ladnaansho Xogta laga Macbook Air
Marka scan ay ka badan tahay, dhammaan xogta laga helay waxaa lagu soo bandhigi doonaa bidix ee daaqadda. Waxaad ka arki kartaa magacyada file in lagu hubiyo sida badan files waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo ceshano. Oo waa inaad xitaa awoodi doonaan in ay ku eegaan image files.
Markaas in dhamaadka, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan files oo guji "Ladnaansho" button iyaga badbaadiya. Fadlan dooro xijaab cusub oo aad xajisaan files soo kabsaday si looga fogaado in la overwritten.
Fiiro Gaar ah: Waxaan aad ugu boorinayna in aad gurmad u files muhiim ah oo ku saabsan Macbook Air.